Samachar Batika || News from Nepal » आज फागुन १९ गते सोमबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
आज फागुन १९ गते सोमबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
हर्षोल्लासको योग रहेको छ । परिवारमा आनन्दको वातावरण छाईरहनेछ ,जसकारण तपाईको मन प्रफुल्लित रहनेछ । तपाईको शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ । व्यवसायमा दिन लाभदायी रहेको छ ।
शारीरिक वा मानसिक रूपबाट स्वास्थ्य निकै राम्रो रहनेछ । तपाई कार्य प्रति एकाग्र हुनुहुनेछ । धन लाभ होला एवं धन सम्बन्धि विषयलाई सुयोजित गर्नुहुनेछ । परिवारसँग समय सुखपूर्वक बित्नेछ । आफ्नो बढेको आत्मविश्वासको स्वयं अनुभव गर्नुहुनेछ ।
शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थतासँग नि’राश रहनुहुनेछ । शारीरिक क’ष्ट, विशेष गरेर आँखामा रहनेछ । परिवार र प्रेमीसँग कुनै घ’टना घट्ला । तपाईको कुरा वा व्यवहारबाट कोहि भ्र’ममा नपरोस । दु’र्घ’टनाबाट बच्नुहोला । आयको अपेक्षा ख’र्च अधिक हुनेछ । मा’नसिक चि’न्ताको कारण नि’राश रहनुहुनेछ ।
दिन आनन्द वा उल्लासमा बित्नेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ । मित्रसँग भेट आनन्द हुनेछ । विवाहोत्सुकको लागि विवाहको योग रहेको छ । शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य राम्रो रहनेछ । कुनै सुन्दर पर्यटन स्थलमा जानुहुनेछ । धनको सुयोजित आयोजन गर्नुहुनेछ ।
तपाईको दृढ मनोबल एवं भरपूर आत्मविश्वासबाट हरेक कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईको प्रतिभा बढ्नेछ । कला एवं खेल-कूदमा निपुण व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा दर्शाउने मौका मिल्नेछ । सरकारसँग धनको व्यवहार सफल रहनेछ ।
अत्यावश्यक निर्णयको लागि दिन उत्तम रहेको छ । सिर्जनात्मक शक्ति वृद्धि हुनेछ । वैचारिक दृढता एवं मानसिक स्थिरताको कारण कार्युसफलतामा सरलता हुनेछ । जीवनसाथीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ ।
बोलीमा ध्यान राख्नुहोला र सरकार वि’रो’धी प्रवृत्ति, क्रो’ध एवं का’मवृत्तिबाट टाढा रहनुहोला । आर्थिक सं’कट आउन सक्ला ।ईश्वरको आराधना एवं आध्यात्मिकताले तपाईको मनलाई शान्ति प्रदान गर्नेछ ।
सामान्य दैनिक कार्यलाई भुलेर आनन्दमा भुल्नुहुनेछ । कुनै मनोरंजन स्थल वा पर्यटनस्थलमा जानले मन अतिप्रसन्न रहनेछ । समाजमा मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ ।
तन र मनको स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । खर्चको चि’न्ताबाट मन अ’शान्त रहन सक्छ । बोलीमा ध्यान राख्नुहोला । घरको खानेकुरा खानुहोला । मनमा न’कारात्मक एवं उ’दासीन विचार नआओस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । आर्थिक दृष्टिकोणबाट दिन मध्यम फलदायी रहेको छ
स्वास्थ्यको विषयमा चि’न्ति’त रहनुहुनेछ । उच्च अधिकारिको रिसको सामना गर्नुपर्नेछ । सन्तानसँग म’तभे’द हुनेछ र स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ ।
तपाईको मन निकै सं’वे’दनशील रहनेछ एवं मा’नसिक रुपबाट अ’स्व’स्थ्य रहनुहुनेछ । विद्याप्राप्तिमा सफलता मिल्नेछ । स्त्री सौन्दर्यमा ख’र्च हुनेछ । जमीन- मकानको पत्रको कार्यमा सावधान रहनुहोला ।
तपाईको दिन निकै शुभ रहेको छ । धार्मिक कार्य एवं यात्राको लागि समय निकै अनुकुल रहेको छ । मित्र एवं आफन्तबाट बहेको भेटले आनन्द अनुभव गर्नुहुनेछ । स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ । विदेशगमनोत्सुकको लागि अनुकूल परिस्थितिको निर्माण हुनेछ । विदेश स्थित प्रेमीको समाचार मिल्नेछ ।
आज फागुन १९ गते सोमबार, तपाईको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!जुन हामीले माथी प्रस्तुत गरीसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार ००:४०